Muxuu ka yiri Éder Militão kulanka la wada sugayo ee Man City & Maqnaanshiyaha Sergio Ramos? – Gool FM
(Manchester) 02 Agoosto 2020. Daafaca reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Éder Militão ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu buuxiyo booska uu ka maqan yahay Sergio Ramos kulanka Manchester City.
Kabtanka kooxda Real Madrid ayaa ka maqnaan doono kulanka soo aadan ee lugta labaad wareega 16-ka tartanka Champions League, kaddib markii uu kaarka cas qaatay ciyaartii lugta hore ee ka dhacday garoonka Santiago Bernabéu, kaasoo ay Sky Blue ku adkaatay 1-2.
Haddaba Éder Militão ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “AS” ee dalka Spain wuxuuna kaga hadlay doorkiisa kaga aadan kulanka Man City, maadaama uu maqan yahay kabtan Sergio Ramos, wuxuuna yiri:
“Ramos ma joogo waana inaan muujiyaa qalbigeyga, waxaan soo bandhigi doonaa wax walba ee aan awoodo, waa dareen runtii aad u xoogan, waa daqiiqad ii gaar ah aniga”.
“Waxaan sheegay in Champions League-ga uu aad muhiim u ahaa, laakiin horyaalka sidoo kale waa muhiim mana sharixi karo dareenka ah inaan ku guuleystay, waxay ahayd wax aan la rumeysan Karin”.
“Hadda Champions League ayaa yimid, waan dagaalami doonaa, waxaana u halgami doonaa sida aan u guuleysan laheyn oo aan ku gaari laheyn finalka”.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Real Madrid ayaa ku booqan doonta Man City garoonka Etihad 7-da bishan August, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka Champions League.